Ukubuyekezwa kwe-FBS Broker - Kumele Ufunde! Ngabe i-FBS iyi-Safe Forex Broker? - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Forex Broker Izibuyekezo Ukubuyekezwa kwe-FBS Broker – Kumele Ufunde! Ngabe i-FBS iyi-Safe Forex Broker?
Forex Broker Izibuyekezo
Ukubuyekezwa kwe-FBS Broker – Kumele Ufunde! Ngabe i-FBS iyi-Safe Forex Broker?
1 Imininingwane Yenkampani
2 Inkundla Yokuhweba ye-FBS
3 Izimakethe Nezimpahla
4 Inani eliphakeme kakhulu lama-FBS
5 Ukusabalala kanye neKhomishini
6 Indlela Yokukhokha Ye-FBS
7 Izicelo Zeselula ze-FBS
8 Bonus & Amaphromoshini
9 Izinzuzo Nezingozi Ze-FBS
10 Ukuphepha & Ukuphepha Kokusebenzisa i-FBS
11 Amazwe Amukelwayo
12 Isinqumo Sokugcina
I-FBS imele i-Financial Brokerage Services, umthengisi we-Asian Forex ozinze eChina, Philippines, I-Malaysia, I-Indonesia, Vietnam, Jordan, naseRussia. Namuhla, umthengisi wamazwe ngamazwe uyasebenza 190 amazwe emhlabeni wonke futhi sibala ngaphezu 13 Abadayisi abayizigidi kanye 370,000 abalingani.
I-FBS ihlinzeka ngemicimbi ekhethekile kanye namasemina kumakhasimende ayo, kanye nezinto zokuqeqesha eziwusizo ukuletha umuzwa ongcono kakhulu wamakhasimende. Abantu abalandela i-FBS basebenzisa ubuchwepheshe obusezingeni eliphezulu kanye namasu akamuva emakethe ye-Forex, okuyinto kokubili abaqalayo nabachwepheshe abayibona iwusizo.
Inhlangano eyinhloko elawulayo ye-FBS yi-IFSC eBelize, abaningi ababekuthatha njengokubi kumthengisi we-Forex. I-Belize yaziwa njengendawo yokukhokha intela kanye ne-IFSC, Ngokwesinye isandla, kuseyisihloko esixakayo senkulumo-mpikiswano uma singaba izinhlangano ezilawulayo zamazwe ngamazwe ezihlonishwa kakhulu.
Inkundla Yokuhweba ye-FBS
Uma uhweba nge-FBS, ungakhetha kumapulatifomu amabili okuhweba, okuyiMetaTrader 4 kanye ne-MetaTrader 5. Zombili lezi zinkundla ziyatholakala ukuze zifakwe kumadivayisi asebenzisa iWindows, iOS, Android, macOS, kanye neWebhu. Umehluko kuphela ukuthi iMetaTrader 4 futhi isebenza nge-Multiterminal.
I-MT4 ne-MT5 iza nazo zonke izici ozidingayo ekuhwebeni kwe-Forex. Ngokuqondene neMetaTrader 4, ihlaziya izingcaphuno zethuluzi lezezimali ngokusebenzisa amashadi asebenzisanayo kanye nezinkomba zobuchwepheshe. Abasebenzisi bangasebenzisa amasu kunoma yiliphi izinga lobunkimbinkimbi.
MT5, Ngokwesinye isandla, iyinkundla yezimpahla eziningi edumile yokuhweba nge-Forex, kanye nekusasa nezinsimbi zokushintshanisa. Iza nemisebenzi yokuhweba yezezimali ethuthukisiwe namathuluzi aphakeme okuhlaziya okuyisisekelo nobuchwepheshe. Iyakwazi futhi ukuhweba okuzenzakalelayo ngokusebenzisa amasignali okuhweba namarobhothi. Abasebenzisi bokuqala kanye nabachwepheshe bangakwazi ukuzivumelanisa ne-UI yayo elula ngokushesha.
I-FBS ivumela ukuhweba nge-Forex, Izinsimbi, CFD, Forex Exotic, kanye Nezitoko. Isebenza futhi eCyprus naseBelize.
Inani eliphakeme kakhulu lama-FBS
Kuwo wonke umhwebi, isilinganiso sibalulekile ekwenzeni ama-oda amanani adlule ngokuphawulekayo amadiphozithi okuqala. Kuyadingeka futhi ukuthola inzuzo enkulu ngokutshalwa kwezimali okuncane.
I-FBS inesilinganiso sokufika 1:3000, okusho ukuthi ungakhetha kukho 1:50 uku 1:3000 zuza uma uhweba. Kodwa qaphela ukuthi amandla aphinde ancike ohlotsheni lwe-akhawunti onayo.
Ukusabalala kanye neKhomishini
Amaklayenti e-FBS angakhetha ezinkethweni ezine zohlobo lwama-akhawunti wonke ahlinzeka ngokusebenza kwemakethe. Nge-akhawunti ye-Cent, unethuba lokuhweba ngezinkatho ezincane ezinesici esinembile sokulawula ubungozi. I-FBS iphinde inikeze ukusabalala okuguquguqukayo, zero spread plus commission, kanye nokuhweba mahhala kwekhomishini.
Wonke ama-akhawunti okuhweba eza nokusabalala okuhambisanayo okusukela -1 Pips ukuze 3 amapipi. Ngezansi kunezinhlobo ezahlukene zokusabalala kwe-FBS. Inani lokusabalalisa nohlobo lomhwebi ngamunye lihambisana nohlobo lwe-akhawunti analo.
Iyantanta ( Kusuka 0.2 pip futhi phezulu)
Kulungisiwe ( Kusuka 3 pips and up)
Ukuhweba ngaphandle kokusabalalisa (0 pip fixed spread)
Indlela Yokukhokha Ye-FBS
Abathengisi be-FBS bangathumela futhi bamukele izinkokhelo ngokusebenzisa izinhlobonhlobo zezindlela, kuhlanganise namakhadi esikweletu njenge-Visa Electron, I-Visa, kanye ne-Mastercard. Abahwebi bangasebenzisa nocingo lwasebhange, I-Neteller, I-Skrill, Imali Ephelele, YuuPay, KULUNGILE, I-FBS Asia Exchanger, kanye neLaoForexBoard.
Izicelo Zeselula ze-FBS
Ukuhweba nge-FBS manje sekulula kakhulu ukusebenzisa uhlelo lokusebenza lomdayisi we-FBS. Itholakalela abasebenzisi be-iOS kanye ne-Android, ukuvumela ukufinyelela okusheshayo kwabo bonke abahwebi emazweni ahlukene.
Uhlelo lokusebenza lweselula lusiza ukwandisa isivinini sokuhweba kanye nokusebenza kahle. Iza nezinsimbi eziphezulu zokuhweba, izibalo zesikhathi sangempela, ukuphathwa okulula, njengeMetaTrader kodwa ngendlela eqondile.
Bonus & Amaphromoshini
Abathengisi be-Forex bayahlukahluka uma kukhulunywa ngamabhonasi nokukhushulwa, okwenza ngamunye athakazelise yedwa. Nge-FBS, abathengisi bangajabulela ama-FBS Traders Parties adlalwa emazweni ahlukene. Abadayisi bangaba nethuba lokuthola imoto kwa-FBS. Enye into iTrade 100 Ibhonasi evumela abasaqalayo ukuthi baqeqeshe futhi bafunde ngeyokuqala yabo $100 kusuka ku-FBS.
Ngaphandle kwalokho, abadayisi bangathola imbuyiselo yemali, ibhonasi kazakwethu, kanye namandla 1:3000.
Izinzuzo Nezingozi Ze-FBS
Ukuhlukahluka okubanzi kwamapulatifomu kungenye yezinzuzo ze-FBS. Iphinde isekele i-MT4 ne-MT5 evumela ukuhweba okulula futhi inikeze ukusabalala okuncintisanayo, ikakhulukazi kuma-akhawunti e-ECN. Idinga kuphela idiphozithi ephansi ephansi, futhi iza nezinhlobonhlobo zokukhushulwa, futhi ihlinzeka ngendawo ye-ECN/STP.
Ububi be-FBS iza nokuhlangana kwayo ne-IFSC, engenalo idumela elihle kakhulu njengenhlangano yokulawula yamazwe ngamazwe.
Ukuphepha & Ukuphepha Kokusebenzisa i-FBS
I-FBS isizuze imiklomelo ehlukene njengomthengisi wamazwe ngamazwe kusukela ngaleso sikhathi 2009. Inikezwe ilayisense ngaphansi kweCyprus, kanye nebhizinisi layo le-EU lisebenza ngaphansi kokuqondisa kokuqondisa kwe-CySEC noma i-Cyprus Securities and Exchange Commission.
I-FBS isebenza ngaphakathi 190 amazwe ahlanganisa i-Indonesia, Vietnam, Jordan, Philippines, kanye neChina, ngaphandle kwe-USA, Japan, UK, Canada, Brazil, Israyeli, I-Malaysia, eMyanmar, kanye ne-Islamic Republic of Iran.
I-FBS ithole ukubuyekezwa okuningi okuhle okuvela kumakhasimende ayo adlule eminyakeni embalwa edlule. Kepha njengabanye abathengisi be-Forex, isabhekana nokugxekwa. Iza nezinzuzo ezibalulekile, okwenza kuthembeke, futhi nokuba nobubi obuncane obukodwa kugcina kungumthengisi ohloniphekile.
Isiqephu esedluleIvolumu Okunqwabelanayo MT5 Inkomba
Isihloko esilandelayoMA Difference MT5 Indicator
Ukubuyekezwa Komthengisi we-LegacyFX - Kumele Kufundwe! Ingabe i-LegacyFX i-Safe Forex Broker?
Ukubuyekezwa kwe-FXOpen Broker – Kumele Ufunde! Ingabe i-FXOpen i-Safe Forex Broker
Ukubuyekezwa kwe-XM Broker – Kumele Ufunde! Ingabe i-XM yiBroker Forex Broker?
I-Double Zigzag - Isikhombi Esingacacisiwe se-MT4
Ephreli 14, 2021
Isu Le-Forex Trend Line Lichazwe Ngezibonelo
Septhemba 17, 2017
Julayi 22, 2020
Isu Lamabhendi e-Forex Bollinger Lichazwe Ngezibonelo
Septhemba 24, 2016
Ukubuyekezwa kwe-XM Broker – Kumele Ufunde! Ingabe i-XM iyi-Forex Ephephile...
Ukubuyekezwa Komthengisi we-LegacyFX - Kumele Kufundwe! Ingabe i-LegacyFX iphephile?.
Ukubuyekezwa kwe-FXOpen Broker – Kumele Ufunde! Ingabe i-FXOpen iyi-Forex Ephephile?.
Top Download Forex Strategies
Julayi 16, 2020
Amabhendi e-Bollinger Cindezela i-MT5 Inkomba
Cindezela Ishadi MT5 Inkomba
I-Trend Band Breakout Forex Trading Strategy
Izinkomba ze-Forex MT54564
Izinkomba ze-Forex MT42340
Amasu we Forex1192
I-Forex Trend Ukulandela Amasu176
Forex Swing Ukuhweba Strategies70
Amasu Okuqhamuka Forex69
© 2022 ForexMT4Indicators.com. Wonke Amalungelo Agodliwe.
Izimpawu Zokuhweba Zamahhala nge 90% Impumelelo
Amakomidi e-Forex - Juni 26, 2022 0